माओवादीका थप ४ जना मन्त्री बन्दै, नामावली सहित - jagritikhabar.com
माओवादीका थप ४ जना मन्त्री बन्दै, नामावली सहित
नेकपा माओवादी केन्द्रका थप ४ जना नेताहरु मन्त्री बन्ने चर्चा हुन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको तर्फबाट ४ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी हुने भएका हुन्। सांसद विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने एक नेताले बताए।
कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। तर मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन बाँकी छ। चार मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको माओवादीले सरकारमा नयाँ व्यक्तिलाई मौका दिने भनेपछि मन्त्री बन्ने आकांक्षीको संख्या बढ्दै गएको छ।
यतिबेला माओवादीमा गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पदमा पुनः दोहो¥याउनु पर्ने दबाब पनि रुकुम पश्चिममा बढ्दै गएको छ। तर, रुकुमले यसअघि नै दुई वटा मन्त्री पाइसकेकोले अन्य ठाउँबाट मन्त्री बनाउने पर्ने दबाब बढ्न थालेपछि रुकुमबाट शर्मा पुनः दोहोरिने सम्भावना कमै छ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा माओवादीका एक नेताले रुकुम बाहेकका जिल्लाबाट मन्त्री बनाउने कसरत माओवादीमा भइरहेको जानकारी गराएका छन्। माओवादीबाट मन्त्री बन्नेमा यतिबेला विन्दामान विष्ट, डोल्पाका वीरबहादुर शाहीको नाम पनि उत्तिकै चर्चामा छ।
माओवादीले तीन मन्त्रालय पाएकोमा गणेशप्रसाद सिंहले मन्त्रीको दाबी गरेका छन। त्यस्तै महिलाको तर्फबाट कृष्णा शाह मन्त्रीको पक्का दाबेदारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
माओवादीको उच्च स्रोतका अनुसार बिन्दमान बिष्ट, वीर बहादुर शाही, गणेशप्रसद सिंह र कृष्णा शाह करिबकरिब पक्का भैसकेको बताइएको छ। नयाँ अनुहारलाई मौका दियो भने राजनीतिक वृतमा सकारात्मक संदेश जाने छ।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी पास गर्छौ भनेर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई पत्र नलेखेको दाबी गरेका छन्।
हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्छौ भनेर प्रचण्ड जी र मैलै हस्ताक्षरनै गरेर अमेरिकालाई पठाइसेकेका छौँ भनेर सार्वजनिक रुपमै दावी गरेका थिए तर सचेतक गुरुङले देउवाको दाबीलाई अस्विकार गरेका छन् ।
देउवाको अभिव्यक्तीका बारेमा ओटीभी नेपाल डटकम सँग कुराकानी गर्दै गुरुङले देउवाले पुरानो कुरा गरेको होला अहिले त्यस्तो केहि भएको छैन भनेका छन् । चार बर्ष अघिनै दलहरुको विचमा असहमती छ धेरै कुरा क्लियर हुनै बाँकी छ भनेर लेखेको पत्रको कुरा होला गुरुले भनेका छन् ।
तर देउवाले अहिले तत्कालको कुरा गरेका छन् प्रचण्ड र मैले तत्काल एमसीसी पास गर्छौ भनेर अमेरिकालाई पत्र लेखेका छाँै भन्ने आशयले भनेका छन् त ? भन्ने ओटीभी नेपाल डटकमको प्रश्नमा गुरुङले आफुलाई त्यस्तो नलागेको र देउवाले अहिलेको होइन पुरानो कुरा गरेको हुन सक्ने उनले बताए ।
प्रचण्ड माथी यस्तो आरोप लागी सके पछि उहाँ र माओवादी केन्द्रले यस बिषयमा केही बोल्नु पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा गुरुङले यस बिषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले खण्डन गर्न सक्ने बताएका छन् । यदि अहिलेको कुरा देउवाले गरेका हुने भने अध्यक्षले यस बिषयमा प्रष्ट पार्नुहुन्छ होला उनले भनेका छन् ।
तपाइहरु एमसीसीको बिषयमा विरोध गरेर हिड्नु भएको छ यति गम्भिर आरोप पार्टी अध्यक्ष माथी लाग्दा पार्टीमा आवाज उठाउँनु हुन्छ की हुँदैन ?भनेर ओटीभी नेपाल डटकमले सोध्दा माओवादी केन्दमा प्रमुख सचेतक गुरुङले यस्ता कुरा पार्टीमा उठिनैरहेको र फेरी पनि उठ्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डको समेत नाम जोडेर एमसीसीमा जोडेपछि राजनिती फेरी तातेको छ । एमसीसी विरोधी अभियान्ताहरु जुरुक्क तातेका छन् तिहार पछि आन्दोलननै गर्ने तयारी पनि कतिपय एमसीसी विरोधी अभियान्ताहरुले गरेको बताइन्छ।
यता फेरि , नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अमेरिकालाई पत्र पठाएको स्विकारेका छन् । उनले उक्त पत्र एमसीसी पास गर्छौं भनेर नपठाएको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय सहमति नभई पारित गर्न नसक्ने भएकाले समय चाहिन्छ भनेर चिठ्ठी पठाएको उनको दाबी छ। बिहीबार बेलायत भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्छौ भनेर प्रचण्ड र आफूले हस्ताक्षर गरेर पठाइसकेको दाबी गरेका थिए । देउवाको अभिव्यक्तिले सत्तारुढ गठबन्धनमा तरंग आएको छ।
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देउवाको दाबीभन्दा केही फरक मत राखे। देउसी खेल्न आफ्नो निवासमा आएका सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हिजो शेरबहादुरजीले कहाँ के बोलिदिनुभएछ, प्रचण्डजी र मैले चिठ्ठी पठासकेको छु भनेर । देशैभरि साथीहरुको तरंग पैदा भएको छ । हामीले त्यस्तो चिठ्ठी पठाएको होइन।
प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले त्यस्तो भनेको त होइन भनेको दाबी गर्दै प्रचण्डले अघि भने, ‘हामीले भनेको के हो भने देशमा सबै दलहरुसँग छलफल नगरी राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन । त्यसका निम्ति हामीलाई समय चाहिन्छ भनेका हौँ।
उनले अगाडि भने, ‘हामी छलफल गर्छौं। समस्या कहाँ छ ? त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर उपाय निकाल्छौं भनेर लेखेको चिठ्ठी हो। हामी पास गर्छौं भनेर लेखेको होइन। एमसीसी सम्झौता गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको, तर त्यो थप्दा समस्या भएको उनले बताए।
पहिला सुरुमा सहमति हुँदा एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजानुपर्ने, अनुमोदन गर्नुपर्ने केही थिएन। अमेरिकाले पैसा दिने, नेपालले दिने र विकास गर्ने भन्ने मात्र थियो। त्यतिबेला हामी पनि सरकारमा थियौं, शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो। उनले भने।
‘त्यतिबेलाको अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको हो । त्यो सम्झौतामा संसदमा लगेर ऐन सरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरामा थिएन,’ उनले भने, ‘पछि त्यसमा त्यो थपियो। त्यसो हुँदा यसको पछाडि के हो त रहस्य भन्ने प्रश्न खडा भयो। र विवाद बन्न आयो।
अमेरिका, बेलायत वा कुनै पनि देशले लिने अनुदान सहयोग लिनु स्वाभाविक भएको भन्दै प्रचण्डले सुरुको सहमतिमा डराउनुपर्ने कुरा नभएको बताए। तर संसदबाट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थप हुँदा विवाद भएको भन्दै उनले भने,
‘बीचमा थपिएका कुराले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि नै असर पर्ने भन्ने आम जनतालाई लागिसकेपछि यसलाई सम्बोधन नगरिकन यसलाई पास गर्न सकिँदैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन सरकारले नै चुनाव गर्ने र सकेसम्म तालमेल गर्ने समेत बताए। इमान्दार मेडिया बाट